ရှုံးမှာကိုမကြောက်ဘူး မြန်မာ၊ တိုးတက်မလာမှာကိုပဲ … - Thadin
Homeအားကစားကဏ္ဍရှုံးမှာကိုမကြောက်ဘူး မြန်မာ၊ တိုးတက်မလာမှာကိုပဲ …
ရှုံးမှာကိုမကြောက်ဘူး မြန်မာ၊ တိုးတက်မလာမှာကိုပဲ …
September 8, 2018 Kay Kay အားကစားကဏ္ဍ Comments Off on ရှုံးမှာကိုမကြောက်ဘူး မြန်မာ၊ တိုးတက်မလာမှာကိုပဲ …
တစ်ခုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ကစားသွားတဲ့မြန်မာအသင်း၊ ပထမပိုင်းမြန်မာ နဲ့ ဒုတိယပိုင်းမြန်မာ၊ ဘယ်အသင်းကို ပိုသဘောတွေ့သလဲ၊ ရှင်းပါတယ်၊ ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ ဒုတိယပိုင်းမြန်မာကိုပိုကြိုက်တာပေါ့လို့ဖြေကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနှစ်သင်းဖြစ်နေတယ်။
အထူး သဖြင့်တိုက်စစ်သွားတာကောင်းတဲ့ လူစုံတဲ့ ဒုတိယပိုင်းမြန်မာကိုလူတွေပိုကြိုက်ကြတယ်၊ ပထမ ပိုင်းမြန်မာ ဂိုးပြတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကို ရှုံးလို့ လူတွေသဘောမတွေ့ဘူး၊ မကောင်း ဘူးတဲ့၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ၊ ရှုံးလိုက်တာမှသောက်သောက်လဲပဲ၊ ဂိုးတွေလည်း ပေးရတယ်၊ ခံစစ်ကလည်း ညံ့ချက်၊9လောက်တောင်ရှိတယ်လို့ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရမလို ပါပဲ၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ မြန်မာအသင်း ပထမပိုင်းကစားတာမကောင်းသလိုတိုက်စစ်သွားတာလည်း မကောင်းခဲ့ဘူး။ မြန်မာအစစ်မ ဟုတ် ဘူး၊ နည်းပြတွေအတွက် စမ်းသပ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အသုံးမတည့်ခဲ့ပေ မယ့်လိုချင်တာလေးတွေတော့ရလိုက်မိမယ်တယ်။
ဒီပွဲက သိပ်ကို အဖိုးတန်တယ်၊ မြန်မာအသင်းအတွက်တော့ အာရှထိပ်သီးအသင်းတစ်သင်းနဲ့ခြေစမ်း ရသလိုမျိုးကို တောင်ကိုရီးယား ယူ-၁၉ အသင်းနဲ့ခြေစမ်းရတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အတွေ့အကြုံ မှမဟုတ်တာ၊ ပရိသတ်အချို့က အိမ်ကွင်းမှာ မြန်မာနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့အားထည့်ကြည့်တယ်၊ မှန်တယ်၊ ပရိသတ်ဆိုတာ နိုင်ဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် မျှော်လင့် ချက်တွေ ရင်ဘတ်ထဲကိုထည့်ပြီးကြည့်တဲ့ သူတွေ၊ အောင်နိုင်ရေးဆိုတာ ပရိတ်သတ်အတွက် တော့ ရွှေပဲ၊ ဒါပေမယ့် အသင်းအတွက်ပြန်ကြည့်ရင် ဒီပွဲကခြေစမ်းပွဲသက်သက်၊ အတွေ့အကြုံ ရယူဖို့သက်သက်ဖြစ်တယ်။
စမ်းသပ်ခြင်းများစွာက အနိုင်ရဖို့ထက် အရေးပါ နေတယ်၊ ကျွန်တော်ပြောအမြဲပြောနေခဲ့သလိုပဲ၊ နိုင်ဖို့ထက် ဘာထပ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ အကဲ ခတ်ရမယ့်အချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ အိမ်ရှင်ဖြစ်လို့ ခြေစမ်းပွဲမှာ ဖလားရရမယ်ဆိုလိုတာမျိုးကို ခဏဖယ်ထားပါ၊ ရလဒ်ကိုဖယ်ပြီး ခြေစွမ်းကို ကြည့်မိခဲ့ကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြန်မာရဲ့အနေအထားကို အားပေးသူ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သိကြပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနဲ့တောင်ကိုရီးယားခြေစွမ်းပိုင်းမှာ ဘာတွေကွာဟသွားပါသလဲ၊ အောင်သူမပါဘူးဆိုတာ လည်းကျွန်တော် ဟာ အောင်သူနဲ့ မနက်ဖြန်၊ မြန်မာနဲ့ ဒီနေ့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက် မှာ ပြောခဲ့ပြီးပြီ၊ အောင်သူပါခြင်းမပါခြင်းထက် မြန်မာအသင်းကစားဟန်နဲ့ကစားကွက်တည် ဆောက်မှု အပိုင်းဟာ နည်းပြဟေးလ်နဲ့ ဦးစိုးမြတ်မင်းအတွက် ဘယ်လောက်တောင်များ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာစေမလဲဆိုတာ သုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါ၊ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ အောင်သူ မပါတော့တိုက်စစ်မှာ မြန်မာအသင်းအတွက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာများသလို၊လူသစ်အချို့ရဲ့ အသားမကျမှုများက အသင်းအတွက် လိုရမရောက်တဲ့တိုက်စစ်ကို အမှားများစေခဲ့တာပဲရှိခဲ့ ရတယ်မဟုတ်ပါလား၊ ထုံးစံအတိုင်းမြန်တယ်၊ မာတယ်၊ ဆိုတာကလွဲရင် မြန်မာအသင်းဟာ ပထမပိုင်းမှာ ပြာယာခတ်နေတာနဲ့ပဲ ကန်ခွင့် ဂိုးပေါက်တည့်တာမျိုးရခဲ့တာမှမဟုတ်တာ၊ ကွင်း လယ်ချိတ်ဆက်မှု ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့သလို၊ မောင်မောင်လွင်နဲ့ဟိန်းဖြိုးဝင်းဘက်အခြမ်းဟာ မြန်ပြီး တော့ ဘောလုံးဆုံးရှုံးတာများခဲ့လို့ အလုပ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း အရာမရောက်ခဲ့ဘူး။
အထူးသဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းခဲ့ရတာပါပဲ၊ ဟိန်းဖြိုးဝင်းနဲ့မင်းကျော်ခန့်တို့ရဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေဟာ အကြည့်ရ အရုပ်ဆိုးစေတယ်။ ဟိန်းဖြိုးဝင်းကစားအားရှိ တယ်၊ မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငယ်သေးတော့ ရမ်းချင်တယ်။ ဒါကိုပြင်ဆင်ရမယ်၊ ပါးနပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ မြန်မာကို တောင်ကိုရီးယားက သာသာယာယာနဲ့ကစားသွားတယ်၊ မြန်မာတိုက်စစ်အလုပ်မဖြစ်သလို ၊ စည်သူအောင်ကလည်း ပုံမှန်ခြေအောက်ရောက်နေခဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဒွေးကိုကိုချစ် တို့လည်း ချိတ်ဆက်မှုထိုးဖောက်မှုကိုဘောလုံးရရှိမှုနည်းတဲ့အောက်မှာပဲ အလုပ်မတွင်ခဲ့ဘူး။
ပိုဆိုးတာက ထက်ဖြိုးဝေ၊ ပွဲထွက်အဆင့်တစ်ခုအောက်မှာ နေရာပေးထားခံရပေမယ့်လည်း အသင်းနဲ့အံကိုက်မဖြစ်မှုတွေကသူ့ကို အခက်တွေ့စေတယ်၊ အထူးသဖြင့် အရွယ်ငယ်ပြီး အကောင်ကြီးတဲ့ေ တာင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေရဲ့ အားနဲ့ ရုန်းကန်မှုကို မကျော်ဖြတ်နိုင်တာ မြန်မာတစ်သင်းလုံးလိုလိုပါပဲ၊ ပထမဂိုး၊ အရွယ်အစားကွာသလို နေရာယူပံခြင်းအပိုင်းမှာ အာရှ နဲ့အရှေ့တောင်အာရှကြားမှာ ခြားနားသွားတဲ့ အယူအဆဟာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြသသွား တာမြင်ရမယ်၊ လူကြားထဲကနေပြီးတော့ အားသုံးပြီးခေါင်းတိုက်သွားတယ်၊ ဒုတိယဂိုး၊ ထိုက်ထိုက်အောင်နဲ့ဟိန်းဖြိုးဝင်းကြားကထဲကနေပြီးထွက်သွားတာကို ပါးပါးနပ်နပ်ကန်သွင်း ပြသွားတယ်၊ မြန်မာနောက်ခံလူတွေကျန်ရစ်ခဲ့တယ်၊ အရှိန်နဲ့အံကိုက်တိုးဝင်မှုအားကို မထိန်း လိုက်နိုင်ဘူး။
ဒါတွေဟာ အာရှဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ကြုံရမယ့်၊တွေ့ရမယ့် သင်ခန်းစာတွေပါ၊ အချိန်ပြည့်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးထိုးဖောက်ပြီးတော့ ဂိုးတွေပါပြတ်သားအောင်သွင်းပြထား တဲ့ တောင်ကိုရီးယားဟာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကစားသွားတာပါ၊ တစ်သင်းလုံး အရပ်အမောင်းကောင်းတယ်။ ရုန်းနိုင်တယ်၊ အကွက်စေ့တယ်၊ မြန်မာကစားသမား နှစ်ယောက်လောက်ကို အသာလေးကျော်ထွက်သွားနိုင်တဲ့အားမျိုးရှိတယ်၊ တောင်ကိုရီးယားလက်ရွေးစင်အသင်းကြီး ထက်ကွာတာဆိုလို့ မြန်နှုန်းနဲ့တိကျတဲ့အပေးအပို့အပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်။
ကစားသမား နေရာယူပါးနပ်မှုအားနည်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အသင်းလိုက်ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းဟာ ကစား သမားတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လို့ဆိုရမယ်။ မှားတာတွေရှိတာတောင် မြန်မာအသင်းက ပိုအားနည်းပြီး ဟာကွက်များလို့ တောင်ကိုရီးယားဟာ ဖိနင်းကစားသွားတာ ဖြစ်တယ်။
အောင်သူတို့ အီစိုးတို့ဝင်လာတဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ မြန်မာတိုက်စစ်ဟာ အရင်လိုပြန်ဖြစ်တယ်။ မြန်လာတယ်၊ ထိုးဖောက်နိုင်ခွင့်ပိုရတယ်၊ အရှိန်လေးပါတင်နိုင်တော့ မြန်မာမဆိုးဘူးပေါ့။ ခက် တာက မြန်မာတိုက်စစ်နဲ့ကွင်းလယ်မှာ ချိတ်ဆက်မှုကတော့အားနည်းနေတုန်းပဲ၊ မောင်မောင် လွင်ဟာ အတွေ့အကြုံအရင့်ဆုံးကစားသမားတွေထဲမှာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်က ချိတ်ဆက်ဖို့ထက် တစ်ကိုယ်တော် ထိုးဖောက်ဖို့ အာရုံရောက်နေတယ်။ သူ့ဆီက ဖြတ်တင် ဘောတွေ သိပ်ကောင်းကောင်းမြင်ရဘူး။
ဟိန်းဖြိုးဝင်းဆီကလည်း မြင်ချင်တဲ့ဖြတ်တင်ဘော တွေကောင်းကောင်းအလုပ်မဖြစ်သလို တက်လာတဲ့ဘောလုံးတွေကြပြန်တော့ အရှေ့မှာ အဆုံးသပ်မယ့်သူကပျောက်နေတယ်။ မြန်မာကစားကစားဟန်ထဲမှာ ဖန်တီးသူမပါဘူး၊ တောင်ပံ သီးသန်နဲ့ထိုးဖောက်တယ်၊ အောင်သူတို့ဝင်လာတော့ အောင်သူနဲ့အီစိုးက သူတို့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ထိုးဖောက်ကာ တစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားမှုတွေနဲ့ပြီးနေတယ်၊ ပြိုင်ပွဲအစဆိုပေမယ့်လည်း တွဲလာတဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွက်တွေ ပုံစံကောင်းတစ်ခုကိုမှ ခံစားရ တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ခံစစ်ပိုင်းကလည်း အခုအချိန်အထိ မငြိမ်သေးဘူး။
ပုံစံဟောင်းအကွက် ထဲမှာ ရောက်နေတုန်းပဲ၊ သူလိုလိုကိုယ်လိုလိုဖြတ်ထုတ်မှုနဲ့ကာကွယ်မှုတွေဟာ တတိယဂိုး ပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားမှာ သိသာစေတယ်။ ဂိုးသမားကျော်ဇင်ထက်အမှားပါသလို၊ ကစား သမားတွေကြားမှာနားလည်မှုလေးတွေကလည်း ပြောစရာဖြစ်စေတယ်။ ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ထိုက် ထိုက်အောင်ကြားမှာ ကွက်လပ်ကပေါ်နေတုန်းပဲ၊ လှိုင်းဘိုဘိုရဲ့အဝေးကန်ချက်တွေမှာ စိုးရိမ် စိတ်တွေများနေတယ်။ ပြီးတော့ အသားတကျမဖြစ်တဲ့ တွဲဖက်ရဲဘော်တွေကြားမှာ သူလည်း ခြေစွမ်းပျောက်နေခဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်တာလည်းမဆန်းဘူး၊
ဒီပွဲမှာ မြန်မာတွေဂိုးပြန်ရတယ်၊ တစ်ဖက်က ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာမကြာခဏရသွားပြီး ကစားအားချတဲ့အချိန်မှာ ပြန်ရတဲ့ ဂိုးတွေ အဆင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ့်ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ရမှာတွေမနည်းဘူး လို့ဆိုချင်တယ်။ (ဆန်ရင်းပဲနာနာဖွတ်ပါရစေ၊ အသက်လွန်နဲ့ အရွယ်လွန်ကိစ္စတွေကို ခဏ မေ့ ထားချင်သေးတယ်။ )
အထူးသဖြင့် အောင်သူမပါတဲ့တိုက်စစ်၊ ခံစစ်တန်းငြိမ်အောင် ကွင်းလယ်ခံစစ်အားဖြည့်တင်း ပေးမယ့် ကစားသမားအပြင် မြန်မာအသင်းအားသန်တဲ့ တစ်ချက်ထိ ကစားဟန်နဲ့တရစပ် အတင်းအကြမ်းဝင်တိုးကာ ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်တာမျိုးတွေဟာ ဂျာမန်နည်းပြကြီးလက် ထဲမှာ ထင်သလောက်မတွေ့ရသေးဘူး၊ တောင်ပံတိုက်စစ်တွေကို အလွန်အားကိုးပြီးတော့ အတိုပေးကစားဟန်တွေလျော့ချထားတဲ့ 4-4-2၊ 4-5-1နဲ့ 4-3-3 လိုသလိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကစားဟန်ဟာ ကြည့်ရတာ အရသာရှိပေမယ့် ခံတွင်းတော့ သိပ်မတွေ့သေးဘူး။
(ပထမပိုင်းနဲ့ ဒုတိယပိုင်း အနေအထားမှာတော့ မြန်မာအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်နေတာတော့ သဘောကျတယ်။ ဒုတိယပိုင်း မြန်မာပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်၊ ပရိသတ်လည်းသိတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းက တိုက်ပွဲဝင်မယ့်မြန်မာအသင်းအစစ်ဖြစ်လာ မယ်၊ ပထမပိုင်းမြန်မာအသင်းက စမ်းသပ်သုံးစွဲတဲ့အသင်း၊ Plan B အတွက် မြန်မာရဲ့ ပထမ ပိုင်းအောင်သူမပါတဲ့၊ အီစိုးမပါတဲ့ စနစ်ဟာ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ကြာမယ့်သဘောရှိတယ်။ တိုက်စစ် သွားနိုင်စွမ်းတွေမရှိသလောက်ပဲ၊ ဒါကို ဖြည့်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်၊ ပရိသတ်တွေကလည်း စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ထားသင့်တယ် )
ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးပွဲမှာ ရလဒ်ကို မကြည့်ကြပါနဲ့၊ မြန်မာအသင်းဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ ပဲကြည့်ပေးစေချင်တာပါ၊ အခုမှ မြန်မာနည်းပြကြီး အတွက် မြန်မာပွဲကို ကိုင်တွယ်တာ2ပွဲ မြောက်ဖြစ်တယ်။ မှားနေဦးမှာပဲ၊ လိုချင်တာကို သွားဖို့အချိန်ပေးနေရတုန်းမှာပါပဲ၊ ကစားသမားတွေ အနေနဲ့လည်း နားလည်မှုကောင်းကိုတည်ဆောက်နေရဦးမှာပါပဲ၊ အသက် အရွယ်တွေကလည်း စကားပြောနေရဦးမှာပါပဲ၊ မြန်မာအသင်းမှာ လိုအပ်တာတွေရှိတယ်၊ ဖြည့်တွေးပေးနေရတယ်။
နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့မြင်ရတဲ့အမြင်တွေကို မြန်မာ နဲ့ပတ်သက်လာရင်လျော့ပြီးတော့ကြည့်ပေးနေရတုန်းပဲ၊ တောင်ကိုရီးယားလူငယ်တွေ ကစားတာမြင်တော့ သူတို့တွေကို မြန်မာအသင်းလိုမျိုးသွားမြင်ပြီးတော့ ခံစားသက်ဝင်မိတဲ့ အခါ ပီတိဖြစ်ထွန်းရတယ်၊ အော်.. ငါတို့မြန်မာ အသင်းလည်း ဒါမျိုးဆိုသိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြေသာနေမိတယ်။
အောင်သူပါမှဖြစ်မှာပါ ဆိုတဲ့အတွေးတွေမှန်တယ်၊ အောင်သူမရှိရင်မြန်မာတိုက်စစ်အလုပ်မ တွင်ဘူး။ အီစိုးသပ်သပ် ၊ အောင်သူ သပ်သပ် အနေအထားလည်းပြင်ရမယ်၊ ဒီနှစ်ယောက် စလုံး လုပ်အားနှုန်းကောင်းတယ်၊ အောင်သူဟာ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်း အားနည်းနေတယ်၊ ရုန်းတာမှန်ပေမယ့် အောင်သူအစစ်မဟုတ်သလိုပဲ၊ ဘောလုံးပြန်လုတာ တွေ တိုးထွက်တာတွေမှာ သူကောင်းကောင်းကစားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ဒီ လိုမျိုးပွဲမှာ ဂိုးသမားကျော်ဇင်ထက်ကို ခေါ်သွားဖို့သုံးတာလား၊ ဒါကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင် အငယ်ဂိုးသမားလေးတွေကို ဘာကြောင့်အရန်ထိုင်ခိုင်းထားသလား၊ အတွေ့အကြုံရဖို့ အတွက် အရန်ခုံဟာ အကောင်းဆုံးအနေအထားလား။
ဒါမှဟုတ်ရင်ကျန်တဲ့ပွဲတွေအတွက် ထည့်ဖြည့်သုံးစမ်းမှာလား၊ မသုံးရင်တော့အလကားဖြစ်မယ်လို့မြင်တယ်၊ ငယ်ရွယ်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ့်မြန်မာအသင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံတကာပွဲ တွေ့ကြုံဆိုတာ ဒီလိုမျိုး အချိန်မှ မရရင် နောက်ထပ်ရဖို့ဆိုတာ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျော်ဇင်ထက် ကို သုံးတာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမှန်တယ်၊ အငယ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ လက်ကျန် အခြားပွဲတွေမှာနေရာ ပေးသင့်တယ်လို့မြင်တယ်။
ရှုံးတာကို၊ ရှုံးမှာကို မကြောက်ဘူး။ အရှုံးဆိုတာ မြန်မာအတွက် ယဉ်ပါးပြီးသား စကားလုံး တစ်ခုပါ၊ ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရှုံးရင် ဝေဖန်ခံရမယ်၊ ဝေဖန်ခံရဲရမယ်၊ ပရိသတ်ဆူတာ ခံနိုင်ရမယ်၊ အမှားကိုပြန်သုံးသပ်နိုင်ရမယ်၊ ပြီးတော့ ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ မြန်မာအသင်းအတွက် ဘာရမလဲဆိုတာပဲ ကြည့်ချင်မိတာပါ။ နိုင်ဖို့ကစားတယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် ဒီမှာမဟုတ်သေးဘူး၊ တစ်ကယ့်ပြိုင်ပွဲအစစ်တွေမှာ လုပ်ရ မှာပါ၊ ဂိုးမရလည်း ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။
ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဘာကိုပြန်ပြင်နိုင်မလဲ၊ ဘာကို ကောင်းမွန် အောင်လုပ်ပြရင်အဆင်မပြေမလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို သာတွေ့ချင်မိနေ တယ်။ မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ။ မြန်မာအသင်းပီသစွာလာပါလိမ့်မယ်၊ မြန်မာအသင်းကြည်မျှစွာ သော အသံများနဲ့ အားပေးဖြစ်နေဦးမှာပါ၊
ပြီးတော့နောက်ပွဲတွေမှာ အငယ်တွေကို ဦးစားပေးသုံးစေချင်တယ်၊ အသက်ကျော်ကစားသမား တွေရဲ့ အားကို သိတယ်၊ ကစားဟန်ကိုသိတယ်၊ သူတို့မပါပဲနဲ့ လည်း ဒီအတိုင်းသီးသန့်သွားစေချင်သေးတယ်။ ယူ-၂၃ အသင်းအစစ်ကို အမှန်အားဖြင့် သိ ချင်မြင်ချင်မိတယ်။ ကိုယ့်ထက် အားကြီးတဲ့အသင်းတွေကိုရှုံးတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။
အဲ့ဒီ အသင်းတွေနဲ့ကစားလို့ရှုံးပြီး မိနစ် ၉၀ အတွင်းမှာ ရယူနိုင်လိုက်တဲ့ အရာတွေကို ပြန်ပြီး တော့ သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့နဲ့ ကောင်းတာကိုယူပြဖို့ပါပဲ၊ ကစားသမားတစ်ယောက် အတွက် ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံဟာ သိပ်ကိုအရေးကြီးသလို အမှားတွေကို ပြန်သုံးသပ်ကာအကောင်းဆုံး အဖြေထုတ်နိုင်ဖို့ပါပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ နည်းပြသစ်အတွက် အစရဲ့အစဖြစ်သလို၊ ကစား သမားအငယ်တွေအတွက်လည်း အရှုံးပေါ်မှာ ရယူနိုင်မယ့် သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်။ (ဘာရိန်းနဲ့ပွဲ ကျန်တယ်၊ ထိုင်းနဲ့ပွဲကျန်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲတွေအပေါ်မှာလည်းမြန်မာ အတွက် ရယူ နိုင်မယ့်ပွဲအတွေ့အကြုံဟာ ဘယ်လောက်များ အာရှအားကစားပွဲတော်အတွက်၊ ဆူဇီကီးဖလားပွဲအတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ )
နိုင်ဖို့ကို မလိုအပ်ဘူး။ ဂိုးသွင်းနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးသေးဘူး။ တစ်ဖက်ရဲ့ ဖိအား ပေးတိုက်စစ်တွေကို စနစ်ကျနဲ့စွာနဲ့ခုခံတော်လှန်နိုင်မယ့် ဟန်မျိုးကိုပဲမြင်ချင်မိတယ်။ တောင် ကိုရီးယားကို ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ဟန်နဲ့စနစ်မျိုးကို နောက်ပွဲတွေမှာ ခပ်များများမြင်ရမယ်၊ မြန်မာယူ-၂၃ လုပ်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင် တာဝန်ရှိသူတွေ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကျင်းပပေးတဲ့ ဒီပြိုင် ပွဲ လုပ်ရကျိုးနပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ပီတိဖြစ်ရ စေမယ့် ခံစားချက်မျိုး ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်။
တစ်ကယ်တော့ရှုံးမှာကို မကြောက် မိပါဘူး။ တိုးတက်မလာမှာကိုပဲ စိုးရိမ်စိတ်ကြီးနေမိတာပါ၊ အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်၊ လူတွေ ပင် ပန်းခဲ့တယ်၊ မျှော်မှန်းချက်တွေအတိုင်းမရောက်ရင်နေ၊ ဖြေသာမယ့်ဆေးပေးဖို့ပဲ လိုချင်ခဲ့မိ တာပါ။ ဒီအတွက် မြန်မာက ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ၊ မေးကြည့်ချင်မိတယ်။ ရင်ခုန်မိနေတုန်းပဲ မြန်မာ၊ ဟုတ်တယ်၊ ရင်ခုန်မိနေတုန်းပဲ မြန်မာရယ်….
တဈခုမေးကွညျ့ခငျြပါတယျ၊ တောငျကိုရီးယားနဲ့ကစားသှားတဲ့မွနျမာအသငျး၊ ပထမပိုငျးမွနျမာ နဲ့ ဒုတိယပိုငျးမွနျမာ၊ ဘယျအသငျးကို ပိုသဘောတှသေ့လဲ၊ ရှငျးပါတယျ၊ ဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ ဒုတိယပိုငျးမွနျမာကိုပိုကွိုကျတာပေါ့လို့ဖွကွေပါလိမျ့မယျ။ မွနျမာနှဈသငျးဖွဈနတေယျ။
အထူး သဖွငျ့တိုကျစဈသှားတာကောငျးတဲ့ လူစုံတဲ့ ဒုတိယပိုငျးမွနျမာကိုလူတှပေိုကွိုကျကွတယျ၊ ပထမ ပိုငျးမွနျမာ ဂိုးပွတျနဲ့တောငျကိုရီးယားကို ရှုံးလို့ လူတှသေဘောမတှဘေူ့း၊ မကောငျး ဘူးတဲ့၊ ဟုတျတာပေါ့၊ ဘယျကောငျးပါ့မလဲ၊ ရှုံးလိုကျတာမှသောကျသောကျလဲပဲ၊ ဂိုးတှလေညျး ပေးရတယျ၊ ခံစဈကလညျး ညံ့ခကျြ၊9လောကျတောငျရှိတယျလို့ ခတျေစကားနဲ့ပွောရမလို ပါပဲ၊ ဟုတျပါတယျ၊ မွနျမာအသငျး ပထမပိုငျးကစားတာမကောငျးသလိုတိုကျစဈသှားတာလညျး မကောငျးခဲ့ဘူး။ မွနျမာအစဈမ ဟုတျ ဘူး၊ နညျးပွတှအေတှကျ စမျးသပျနတေဲ့ ပုံစံနဲ့စနဈတဈခုဖွဈတယျ။ အသုံးမတညျ့ခဲ့ပေ မယျ့လိုခငျြတာလေးတှတေော့ရလိုကျမိမယျတယျ။
ဒီပှဲက သိပျကို အဖိုးတနျတယျ၊ မွနျမာအသငျးအတှကျတော့ အာရှထိပျသီးအသငျးတဈသငျးနဲ့ခွစေမျး ရသလိုမြိုးကို တောငျကိုရီးယား ယူ-၁၉ အသငျးနဲ့ခွစေမျးရတယျဆိုတာ နညျးတဲ့အတှအေ့ကွုံ မှမဟုတျတာ၊ ပရိသတျအခြို့က အိမျကှငျးမှာ မွနျမာနိုငျမှဖွဈမယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့အားထညျ့ကွညျ့တယျ၊ မှနျတယျ၊ ပရိသတျဆိုတာ နိုငျဖို့တဈခုတညျးအတှကျ မြှျောလငျ့ ခကျြတှေ ရငျဘတျထဲကိုထညျ့ပွီးကွညျ့တဲ့ သူတှေ၊ အောငျနိုငျရေးဆိုတာ ပရိတျသတျအတှကျ တော့ ရှပေဲ၊ ဒါပမေယျ့ အသငျးအတှကျပွနျကွညျ့ရငျ ဒီပှဲကခွစေမျးပှဲသကျသကျ၊ အတှအေ့ကွုံ ရယူဖို့သကျသကျဖွဈတယျ။
စမျးသပျခွငျးမြားစှာက အနိုငျရဖို့ထကျ အရေးပါ နတေယျ၊ ကြှနျတျောပွောအမွဲပွောနခေဲ့သလိုပဲ၊ နိုငျဖို့ထကျ ဘာထပျလုပျနိုငျမလဲဆိုတာ အကဲ ခတျရမယျ့အခြိနျမြိုးဖွဈနတေယျ။ အိမျရှငျဖွဈလို့ ခွစေမျးပှဲမှာ ဖလားရရမယျဆိုလိုတာမြိုးကို ခဏဖယျထားပါ၊ ရလဒျကိုဖယျပွီး ခွစှေမျးကို ကွညျ့မိခဲ့ကွတဲ့တောငျကိုရီးယားနဲ့မွနျမာရဲ့အနအေထားကို အားပေးသူ ပရိသတျတှအေနနေဲ့သိကွပါလိမျ့မယျ။
မွနျမာနဲ့တောငျကိုရီးယားခွစှေမျးပိုငျးမှာ ဘာတှကှောဟသှားပါသလဲ၊ အောငျသူမပါဘူးဆိုတာ လညျးကြှနျတျော ဟာ အောငျသူနဲ့ မနကျဖွနျ၊ မွနျမာနဲ့ ဒီနဆေို့တဲ့ ခေါငျးစဉျတဈခုအောကျ မှာ ပွောခဲ့ပွီးပွီ၊ အောငျသူပါခွငျးမပါခွငျးထကျ မွနျမာအသငျးကစားဟနျနဲ့ကစားကှကျတညျ ဆောကျမှု အပိုငျးဟာ နညျးပွဟေးလျနဲ့ ဦးစိုးမွတျမငျးအတှကျ ဘယျလောကျတောငျမြား အပွောငျးအလဲတဈခုဖွဈလာစမေလဲဆိုတာ သုံးသပျပေးခဲ့တာပါ၊ ထငျတဲ့အတိုငျးပဲ၊ အောငျသူ မပါတော့တိုကျစဈမှာ မွနျမာအသငျးအတှကျအလုပျမဖွဈခဲ့တာမြားသလို၊လူသဈအခြို့ရဲ့ အသားမကမြှုမြားက အသငျးအတှကျ လိုရမရောကျတဲ့တိုကျစဈကို အမှားမြားစခေဲ့တာပဲရှိခဲ့ ရတယျမဟုတျပါလား၊ ထုံးစံအတိုငျးမွနျတယျ၊ မာတယျ၊ ဆိုတာကလှဲရငျ မွနျမာအသငျးဟာ ပထမပိုငျးမှာ ပွာယာခတျနတောနဲ့ပဲ ကနျခှငျ့ ဂိုးပေါကျတညျ့တာမြိုးရခဲ့တာမှမဟုတျတာ၊ ကှငျး လယျခြိတျဆကျမှု ဖရိုဖရဲဖွဈခဲ့သလို၊ မောငျမောငျလှငျနဲ့ဟိနျးဖွိုးဝငျးဘကျအခွမျးဟာ မွနျပွီး တော့ ဘောလုံးဆုံးရှုံးတာမြားခဲ့လို့ အလုပျဖွဈပမေယျ့လညျး အရာမရောကျခဲ့ဘူး။
အထူးသဖွငျ့ ခြိတျဆကျမှုအပိုငျးမှာ အားနညျးခဲ့ရတာပါပဲ၊ ဟိနျးဖွိုးဝငျးနဲ့မငျးကြျောခနျ့တို့ရဲ့ မလိုလားအပျတဲ့ကွမျးတမျးမှုတှဟော အကွညျ့ရ အရုပျဆိုးစတေယျ။ ဟိနျးဖွိုးဝငျးကစားအားရှိ တယျ၊ မှနျတယျ၊ ဒါပမေယျ့ငယျသေးတော့ ရမျးခငျြတယျ။ ဒါကိုပွငျဆငျရမယျ၊ ပါးနပျဖို့လိုအပျတယျ။ မွနျမာကို တောငျကိုရီးယားက သာသာယာယာနဲ့ကစားသှားတယျ၊ မွနျမာတိုကျစဈအလုပျမဖွဈသလို ၊ စညျသူအောငျကလညျး ပုံမှနျခွအေောကျရောကျနခေဲ့ပွီး အတှအေ့ကွုံမြားတဲ့ ဒှေးကိုကိုခဈြ တို့လညျး ခြိတျဆကျမှုထိုးဖောကျမှုကိုဘောလုံးရရှိမှုနညျးတဲ့အောကျမှာပဲ အလုပျမတှငျခဲ့ဘူး။
ပိုဆိုးတာက ထကျဖွိုးဝေ၊ ပှဲထှကျအဆငျ့တဈခုအောကျမှာ နရောပေးထားခံရပမေယျ့လညျး အသငျးနဲ့အံကိုကျမဖွဈမှုတှကေသူ့ကို အခကျတှစေ့တေယျ၊ အထူးသဖွငျ့ အရှယျငယျပွီး အကောငျကွီးတဲ့ေ တာငျကိုရီးယားလူငယျတှရေဲ့ အားနဲ့ ရုနျးကနျမှုကို မကြျောဖွတျနိုငျတာ မွနျမာတဈသငျးလုံးလိုလိုပါပဲ၊ ပထမဂိုး၊ အရှယျအစားကှာသလို နရောယူပံခွငျးအပိုငျးမှာ အာရှ နဲ့အရှတေ့ောငျအာရှကွားမှာ ခွားနားသှားတဲ့ အယူအဆဟာ ကှကျကှကျကှငျးကှငျးပွသသှား တာမွငျရမယျ၊ လူကွားထဲကနပွေီးတော့ အားသုံးပွီးခေါငျးတိုကျသှားတယျ၊ ဒုတိယဂိုး၊ ထိုကျထိုကျအောငျနဲ့ဟိနျးဖွိုးဝငျးကွားကထဲကနပွေီးထှကျသှားတာကို ပါးပါးနပျနပျကနျသှငျး ပွသှားတယျ၊ မွနျမာနောကျခံလူတှကေနျြရဈခဲ့တယျ၊ အရှိနျနဲ့အံကိုကျတိုးဝငျမှုအားကို မထိနျး လိုကျနိုငျဘူး။
ဒါတှဟော အာရှဖလား ပွိုငျပှဲမှာ ကွုံရမယျ့၊တှရေ့မယျ့ သငျခနျးစာတှပေါ၊ အခြိနျပွညျ့ပထမပိုငျးတဈပိုငျးလုံးထိုးဖောကျပွီးတော့ ဂိုးတှပေါပွတျသားအောငျသှငျးပွထား တဲ့ တောငျကိုရီးယားဟာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကစားသှားတာပါ၊ တဈသငျးလုံး အရပျအမောငျးကောငျးတယျ။ ရုနျးနိုငျတယျ၊ အကှကျစတေ့ယျ၊ မွနျမာကစားသမား နှဈယောကျလောကျကို အသာလေးကြျောထှကျသှားနိုငျတဲ့အားမြိုးရှိတယျ၊ တောငျကိုရီးယားလကျရှေးစငျအသငျးကွီး ထကျကှာတာဆိုလို့ မွနျနှုနျးနဲ့တိကတြဲ့အပေးအပို့အပိုငျးလောကျပဲရှိတယျ။
ကစားသမား နရောယူပါးနပျမှုအားနညျးတယျဆိုပမေယျ့လညျး အသငျးလိုကျခြိတျဆကျမှုအပိုငျးဟာ ကစား သမားတိုငျး အတုယူဖို့ကောငျးတဲ့အခကျြလို့ဆိုရမယျ။ မှားတာတှရှေိတာတောငျ မွနျမာအသငျးက ပိုအားနညျးပွီး ဟာကှကျမြားလို့ တောငျကိုရီးယားဟာ ဖိနငျးကစားသှားတာ ဖွဈတယျ။
အောငျသူတို့ အီစိုးတို့ဝငျလာတဲ့ ဒုတိယပိုငျးမှာ မွနျမာတိုကျစဈဟာ အရငျလိုပွနျဖွဈတယျ။ မွနျလာတယျ၊ ထိုးဖောကျနိုငျခှငျ့ပိုရတယျ၊ အရှိနျလေးပါတငျနိုငျတော့ မွနျမာမဆိုးဘူးပေါ့။ ခကျ တာက မွနျမာတိုကျစဈနဲ့ကှငျးလယျမှာ ခြိတျဆကျမှုကတော့အားနညျးနတေုနျးပဲ၊ မောငျမောငျ လှငျဟာ အတှအေ့ကွုံအရငျ့ဆုံးကစားသမားတှထေဲမှာပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ သူကိုယျတိုငျက ခြိတျဆကျဖို့ထကျ တဈကိုယျတျော ထိုးဖောကျဖို့ အာရုံရောကျနတေယျ။ သူ့ဆီက ဖွတျတငျ ဘောတှေ သိပျကောငျးကောငျးမွငျရဘူး။
ဟိနျးဖွိုးဝငျးဆီကလညျး မွငျခငျြတဲ့ဖွတျတငျဘော တှကေောငျးကောငျးအလုပျမဖွဈသလို တကျလာတဲ့ဘောလုံးတှကွေပွနျတော့ အရှမှေ့ာ အဆုံးသပျမယျ့သူကပြောကျနတေယျ။ မွနျမာကစားကစားဟနျထဲမှာ ဖနျတီးသူမပါဘူး၊ တောငျပံ သီးသနျနဲ့ထိုးဖောကျတယျ၊ အောငျသူတို့ဝငျလာတော့ အောငျသူနဲ့အီစိုးက သူတို့ ကြှမျးကငျြမှုနဲ့ထိုးဖောကျကာ တဈကိုယျတျောစှနျ့စားမှုတှနေဲ့ပွီးနတေယျ၊ ပွိုငျပှဲအစဆိုပမေယျ့လညျး တှဲလာတဲ့လကေ့ငျြ့ရေးကှကျတှေ ပုံစံကောငျးတဈခုကိုမှ ခံစားရ တယျဆိုတာမရှိဘူး။ ခံစဈပိုငျးကလညျး အခုအခြိနျအထိ မငွိမျသေးဘူး။
ပုံစံဟောငျးအကှကျ ထဲမှာ ရောကျနတေုနျးပဲ၊ သူလိုလိုကိုယျလိုလိုဖွတျထုတျမှုနဲ့ကာကှယျမှုတှဟော တတိယဂိုး ပေးလိုကျရတဲ့အနအေထားမှာ သိသာစတေယျ။ ဂိုးသမားကြျောဇငျထကျအမှားပါသလို၊ ကစား သမားတှကွေားမှာနားလညျမှုလေးတှကေလညျး ပွောစရာဖွဈစတေယျ။ ဇျောမငျးထှနျးနဲ့ထိုကျ ထိုကျအောငျကွားမှာ ကှကျလပျကပျေါနတေုနျးပဲ၊ လှိုငျးဘိုဘိုရဲ့အဝေးကနျခကျြတှမှော စိုးရိမျ စိတျတှမြေားနတေယျ။ ပွီးတော့ အသားတကမြဖွဈတဲ့ တှဲဖကျရဲဘျောတှကွေားမှာ သူလညျး ခွစှေမျးပြောကျနခေဲ့တော့ အလုပျမဖွဈတာလညျးမဆနျးဘူး၊
ဒီပှဲမှာ မွနျမာတှဂေိုးပွနျရတယျ၊ တဈဖကျက ကစားသမားတှေ ဒဏျရာမကွာခဏရသှားပွီး ကစားအားခတြဲ့အခြိနျမှာ ပွနျရတဲ့ ဂိုးတှေ အဆငျ့ရှိတယျဆိုပမေယျ့ တဈကယျ့ပွိုငျပှဲမှာမွနျမာအနနေဲ့ ပွငျဆငျရမှာတှမေနညျးဘူး လို့ဆိုခငျြတယျ။ (ဆနျရငျးပဲနာနာဖှတျပါရစေ၊ အသကျလှနျနဲ့ အရှယျလှနျကိစ်စတှကေို ခဏ မေ့ ထားခငျြသေးတယျ။ )
အထူးသဖွငျ့ အောငျသူမပါတဲ့တိုကျစဈ၊ ခံစဈတနျးငွိမျအောငျ ကှငျးလယျခံစဈအားဖွညျ့တငျး ပေးမယျ့ ကစားသမားအပွငျ မွနျမာအသငျးအားသနျတဲ့ တဈခကျြထိ ကစားဟနျနဲ့တရစပျ အတငျးအကွမျးဝငျတိုးကာ ထိုးဖောကျတိုကျစဈဆငျတာမြိုးတှဟော ဂြာမနျနညျးပွကွီးလကျ ထဲမှာ ထငျသလောကျမတှရေ့သေးဘူး၊ တောငျပံတိုကျစဈတှကေို အလှနျအားကိုးပွီးတော့ အတိုပေးကစားဟနျတှလြေော့ခထြားတဲ့ 4-4-2၊ 4-5-1နဲ့ 4-3-3 လိုသလိုပွောငျးလဲသှားတဲ့ ကစားဟနျဟာ ကွညျ့ရတာ အရသာရှိပမေယျ့ ခံတှငျးတော့ သိပျမတှသေ့ေးဘူး။
(ပထမပိုငျးနဲ့ ဒုတိယပိုငျး အနအေထားမှာတော့ မွနျမာအသငျးနှဈသငျးဖွဈနတောတော့ သဘောကတြယျ။ ဒုတိယပိုငျး မွနျမာပိုပွီးတော့ကောငျးမှနျတယျ၊ ပရိသတျလညျးသိတယျ။ အဲ့ဒီအသငျးက တိုကျပှဲဝငျမယျ့မွနျမာအသငျးအစဈဖွဈလာ မယျ၊ ပထမပိုငျးမွနျမာအသငျးက စမျးသပျသုံးစှဲတဲ့အသငျး၊ Plan B အတှကျ မွနျမာရဲ့ ပထမ ပိုငျးအောငျသူမပါတဲ့၊ အီစိုးမပါတဲ့ စနဈဟာ အလုပျဖွဈဖို့ကွာမယျ့သဘောရှိတယျ။ တိုကျစဈ သှားနိုငျစှမျးတှမေရှိသလောကျပဲ၊ ဒါကို ဖွညျ့ဖို့လိုအပျနသေေးတယျ၊ ပရိသတျတှကေလညျး စမျးသပျသုံးစှဲမှုကို နားလညျသဘောပေါကျထားသငျ့တယျ )
ပွီးတော့ ဒီလိုမြိုးပှဲမှာ ရလဒျကို မကွညျ့ကွပါနဲ့၊ မွနျမာအသငျးဘာလုပျနိုငျသလဲဆိုတာ ပဲကွညျ့ပေးစခေငျြတာပါ၊ အခုမှ မွနျမာနညျးပွကွီး အတှကျ မွနျမာပှဲကို ကိုငျတှယျတာ2ပှဲ မွောကျဖွဈတယျ။ မှားနဦေးမှာပဲ၊ လိုခငျြတာကို သှားဖို့အခြိနျပေးနရေတုနျးမှာပါပဲ၊ ကစားသမားတှေ အနနေဲ့လညျး နားလညျမှုကောငျးကိုတညျဆောကျနရေဦးမှာပါပဲ၊ အသကျ အရှယျတှကေလညျး စကားပွောနရေဦးမှာပါပဲ၊ မွနျမာအသငျးမှာ လိုအပျတာတှရှေိတယျ၊ ဖွညျ့တှေးပေးနရေတယျ။
နိုငျငံတကာစံနှုနျးနဲ့တိုငျးတာပွီးတော့မွငျရတဲ့အမွငျတှကေို မွနျမာ နဲ့ပတျသကျလာရငျလြော့ပွီးတော့ကွညျ့ပေးနရေတုနျးပဲ၊ တောငျကိုရီးယားလူငယျတှေ ကစားတာမွငျတော့ သူတို့တှကေို မွနျမာအသငျးလိုမြိုးသှားမွငျပွီးတော့ ခံစားသကျဝငျမိတဲ့ အခါ ပီတိဖွဈထှနျးရတယျ၊ အျော.. ငါတို့မွနျမာ အသငျးလညျး ဒါမြိုးဆိုသိပျကောငျးမှာပဲဆိုတဲ့ စိတျလေးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျဖွသောနမေိတယျ။
အောငျသူပါမှဖွဈမှာပါ ဆိုတဲ့အတှေးတှမှေနျတယျ၊ အောငျသူမရှိရငျမွနျမာတိုကျစဈအလုပျမ တှငျဘူး။ အီစိုးသပျသပျ ၊ အောငျသူ သပျသပျ အနအေထားလညျးပွငျရမယျ၊ ဒီနှဈယောကျ စလုံး လုပျအားနှုနျးကောငျးတယျ၊ အောငျသူဟာ တောငျကိုရီးယားနဲ့ပှဲမှာ ကွံ့ခိုငျမှုအပိုငျး အားနညျးနတေယျ၊ ရုနျးတာမှနျပမေယျ့ အောငျသူအစဈမဟုတျသလိုပဲ၊ ဘောလုံးပွနျလုတာ တှေ တိုးထှကျတာတှမှော သူကောငျးကောငျးကစားနိုငျတာမြိုးမဟုတျသေးဘူး။ ပွီးတော့ ဒီ လိုမြိုးပှဲမှာ ဂိုးသမားကြျောဇငျထကျကို ချေါသှားဖို့သုံးတာလား၊ ဒါကိုရညျရှယျတယျဆိုရငျ အငယျဂိုးသမားလေးတှကေို ဘာကွောငျ့အရနျထိုငျခိုငျးထားသလား၊ အတှအေ့ကွုံရဖို့ အတှကျ အရနျခုံဟာ အကောငျးဆုံးအနအေထားလား။
ဒါမှဟုတျရငျကနျြတဲ့ပှဲတှအေတှကျ ထညျ့ဖွညျ့သုံးစမျးမှာလား၊ မသုံးရငျတော့အလကားဖွဈမယျလို့မွငျတယျ၊ ငယျရှယျပွီး နောကျတဈဆငျ့သှားမယျ့မွနျမာအသငျးသားတှဟော နိုငျငံတကာပှဲ တှကွေုံ့ဆိုတာ ဒီလိုမြိုး အခြိနျမှ မရရငျ နောကျထပျရဖို့ဆိုတာ လှယျမှာမဟုတျဘူး။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြျောဇငျထကျ ကို သုံးတာ ရညျရှယျခကျြရှိတာမှနျတယျ၊ အငယျတှကေိုလညျးပွနျပွီးတော့ လကျကနျြ အခွားပှဲတှမှောနရော ပေးသငျ့တယျလို့မွငျတယျ။
ရှုံးတာကို၊ ရှုံးမှာကို မကွောကျဘူး။ အရှုံးဆိုတာ မွနျမာအတှကျ ယဉျပါးပွီးသား စကားလုံး တဈခုပါ၊ ပှဲတဈပှဲမှာ ရှုံးရငျ ဝဖေနျခံရမယျ၊ ဝဖေနျခံရဲရမယျ၊ ပရိသတျဆူတာ ခံနိုငျရမယျ၊ အမှားကိုပွနျသုံးသပျနိုငျရမယျ၊ ပွီးတော့ ဒီပွိုငျပှဲကနပွေီးတော့ မွနျမာအသငျးအတှကျ ဘာရမလဲဆိုတာပဲ ကွညျ့ခငျြမိတာပါ။ နိုငျဖို့ကစားတယျဆိုတဲ့ ခံယူခကျြ ဒီမှာမဟုတျသေးဘူး၊ တဈကယျ့ပွိုငျပှဲအစဈတှမှော လုပျရ မှာပါ၊ ဂိုးမရလညျး ရှကျစရာမဟုတျဘူး။
ရှုံးခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဘာကိုပွနျပွငျနိုငျမလဲ၊ ဘာကို ကောငျးမှနျ အောငျလုပျပွရငျအဆငျမပွမေလဲဆိုတာမြိုးနဲ့ သိသာတဲ့ပွောငျးလဲမှုမြိုးကို သာတှခေ့ငျြမိနေ တယျ။ မွနျမာဟာ မွနျမာပါပဲ။ မွနျမာအသငျးပီသစှာလာပါလိမျ့မယျ၊ မွနျမာအသငျးကွညျမြှစှာ သော အသံမြားနဲ့ အားပေးဖွဈနဦေးမှာပါ၊
ပွီးတော့နောကျပှဲတှမှော အငယျတှကေို ဦးစားပေးသုံးစခေငျြတယျ၊ အသကျကြျောကစားသမား တှရေဲ့ အားကို သိတယျ၊ ကစားဟနျကိုသိတယျ၊ သူတို့မပါပဲနဲ့ လညျး ဒီအတိုငျးသီးသနျ့သှားစခေငျြသေးတယျ။ ယူ-၂၃ အသငျးအစဈကို အမှနျအားဖွငျ့ သိ ခငျြမွငျခငျြမိတယျ။ ကိုယျ့ထကျ အားကွီးတဲ့အသငျးတှကေိုရှုံးတာရှကျစရာမဟုတျဘူး။
အဲ့ဒီ အသငျးတှနေဲ့ကစားလို့ရှုံးပွီး မိနဈ ၉၀ အတှငျးမှာ ရယူနိုငျလိုကျတဲ့ အရာတှကေို ပွနျပွီး တော့ သုံးသပျဆငျခွငျနိုငျဖို့နဲ့ ကောငျးတာကိုယူပွဖို့ပါပဲ၊ ကစားသမားတဈယောကျ အတှကျ ပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံဟာ သိပျကိုအရေးကွီးသလို အမှားတှကေို ပွနျသုံးသပျကာအကောငျးဆုံး အဖွထေုတျနိုငျဖို့ပါပဲ၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒါဟာ နညျးပွသဈအတှကျ အစရဲ့အစဖွဈသလို၊ ကစား သမားအငယျတှအေတှကျလညျး အရှုံးပျေါမှာ ရယူနိုငျမယျ့ သငျခနျးစာဖွဈတယျ။ (ဘာရိနျးနဲ့ပှဲ ကနျြတယျ၊ ထိုငျးနဲ့ပှဲကနျြတယျ၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီပှဲတှအေပျေါမှာလညျးမွနျမာ အတှကျ ရယူ နိုငျမယျ့ပှဲအတှအေ့ကွုံဟာ ဘယျလောကျမြား အာရှအားကစားပှဲတျောအတှကျ၊ ဆူဇီကီးဖလားပှဲအတှကျ အထောကျအပံ့ကောငျးတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရမှာဖွဈတယျ ဆိုတာပါပဲ။ )
နိုငျဖို့ကို မလိုအပျဘူး။ ဂိုးသှငျးနိုငျမှဖွဈမယျဆိုတာ အရေးမကွီးသေးဘူး။ တဈဖကျရဲ့ ဖိအား ပေးတိုကျစဈတှကေို စနဈကနြဲ့စှာနဲ့ခုခံတျောလှနျနိုငျမယျ့ ဟနျမြိုးကိုပဲမွငျခငျြမိတယျ။ တောငျ ကိုရီးယားကို ပွနျတိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ ဟနျနဲ့စနဈမြိုးကို နောကျပှဲတှမှော ခပျမြားမြားမွငျရမယျ၊ မွနျမာယူ-၂၃ လုပျပွနိုငျမယျဆိုရငျ တာဝနျရှိသူတှေ ငှကေုနျကွေးကခြံပွီး ကငျြးပပေးတဲ့ ဒီပွိုငျ ပှဲ လုပျရကြိုးနပျသှားလိမျ့မယျဆိုတာပါပဲ။ ပွီးတော့ ပရိသတျတှအေတှကျလညျး ပီတိဖွဈရ စမေယျ့ ခံစားခကျြမြိုး ပေးစှမျးနိုငျလိမျ့မယျလို့ထငျမိတယျ။
တဈကယျတော့ရှုံးမှာကို မကွောကျ မိပါဘူး။ တိုးတကျမလာမှာကိုပဲ စိုးရိမျစိတျကွီးနမေိတာပါ၊ အခြိနျတှကေုနျခဲ့တယျ၊ လူတှေ ပငျ ပနျးခဲ့တယျ၊ မြှျောမှနျးခကျြတှအေတိုငျးမရောကျရငျနေ၊ ဖွသောမယျ့ဆေးပေးဖို့ပဲ လိုခငျြခဲ့မိ တာပါ။ ဒီအတှကျ မွနျမာက ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ၊ မေးကွညျ့ခငျြမိတယျ။ ရငျခုနျမိနတေုနျးပဲ မွနျမာ၊ ဟုတျတယျ၊ ရငျခုနျမိနတေုနျးပဲ မွနျမာရယျ….
ပေါင် ၁၇၀ ကနေ ၁၁၈ ပေါင်ဖြစ်အောင် တစ်လအတွင်း ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ခသုံးလုံးရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ သရုပ်ဆောင်သစ် ထက်ဇာနည်ဟိန်း
This Month : 35964
This Year : 177421
Total Users : 536445
Total views : 2426764